Akụkọ - Otu esi ahọpụta artiest sere maka ndị mbido?
Typesdị ụdị brushes nke artiest anyị na-ejikarị eserese bụ ndị a: firstdị nke mbụ bụ eriri anụ ahụ, nke bụ bristles. Gụnyere bristles, wolf ntutu, mink ntutu na na. Akụkụ nke abụọ bụ eriri kemịkal. Anyị na-ejikarị naịlọn.
A na-azụta ahịhịa ihe osise ọhụrụ iji rụọ ọrụ nhazi dị mfe. Ọ bụrụ na ọ bụ eke eriri agba ahịhịa, ụfọdụ n'ime ya na-glued. Candị agba agba a nwere ike tinye ya na mmiri ọkụ maka nkeji iri na ise wee jiri nwayọọ na-ete ya. Mgbe etinyere ntutu brush, hichaa ihe fọdụrụnụ na mmiri dị ọcha. Ọ bụrụ na agbanyeghị ahịhịa ahụ, enwere ike iji ya mee ihe ozugbo, mana ọ kachasị mma iji mmiri kpochapụ iji wepụ ntutu na-ese n'elu ahịhịa. Ngwurugwu ihe osise nke na-acha uhie uhie na-agụnye ụrọ dị mma dị ka mink ntutu, ntutu wolf, wdg, yana akwa brushes dị ka bristles.
Ngwurugwu ahịhịa nke eriri kemịkal na-adịkarị njọ, na-agbanwe agbanwe dịgasị iche dabere na ụdị. Otú ọ dị, absorbency anaghị adịkarị mma, ọ dịkwa mma maka ịkpụzi nke ọma. Nhọrọ nke brushes na-adabere na mkpa onwe onye nke onye omenkà na nka nke aka ya.
Ihe na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie nwere ezigbo ekwedo, na ahịhịa ahịhịa nke bristle ahụ doro anya, nke na-eme ka nchịkọta pigments mepụta mmetụta ederede. Ahịhịa nke bristle adịghị adabara ngwa ngwa. N'ihi nrụgide siri ike ya, ọ dị oke nhịahụ itinye ya ugboro ugboro na agba agba agba nke akachabeghị. Karịsịa mgbe agba agba dị ala dị ezigbo mkpa, site na enyemaka nke ihe mgbaze nke ọkara, ọ dị mfe ịchacha akwa agba agba ma kpughee ala nke eserese.
Kolinsky sere ahịhịa
Brọsh dị ka kolinsky ntutu na wolf ntutu nwere ezigbo absorbency na-adịghị ewekarị doro anya ọrịa strok. Ha dị mfe ijikọ ma dị mma maka ịbịaru eserese ọdịnala siri ike na nke siri ike. Brọsh ndị a dị ezigbo mma maka ngwa dị nro n'ihi ike na-esighi ike ha mana ọ bụ ezigbo absorption. Karịsịa nnukwu-uzo mkpuchi-ehicha naịlọn brushes nwere magburu onwe ekwedo na ike ise ụfọdụ doro anya ma dị ike na ọrịa strok na usoro nke ezi ihe ngosi.